'रातो कर' विरूद्ध आन्दोलन गरिरहेकी शुभांगी (भिडिओ) :: मनोज सत्याल :: Setopati
के तपाईंलाई पछिल्लो पटक चलिरहेको रातो कर माफ गर अभियानबारे थाहा छ?
यो अभियानमा सहभागीहरूले कहिले ठूलो स्वरमा बाजागाजा सहितको (फ्ल्यास मोब) त कहिले माइतीघरमा प्रदर्शन गर्ने गरेका छन्। उनीहरू सरकारलाई महिनावारीका बेला प्रयोग हुने प्याड तथा अन्य सामग्रीमा लागिरहेको कर हटाउन दबाब दिइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पनि उनीहरूले प्रचार गरिरहेका छन्।
नेपालमा महिनावारीको समयमा प्रयोग हुने प्याडलगायत सामानमा अहिले १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने गरेको छ। त्यस्तै विदेशबाट आयात हुने प्याडमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्छ। यही कर हटाउने प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेकी छिन्, सन् २०२० मा विश्वप्रसिद्ध फोर्ब्स म्येगजिनले प्रकाशित गर्ने ३० वर्षमूनिका प्रभावशाली युवाको सूचीमा परेकी शुभांगी राणा। शुभांगी र उनकी साथी जेसिलना राणाको कम्पनी 'प्याड टु गो' ले सन् २०२० मा सामाजिक उद्यमतर्फ फोर्ब्सको लिस्टमा आफूलाई समेट्न सकेको थियो। उनीहरूको कम्पनीले नेपालमा प्याड भेन्डिङ मेसिन बेच्ने कामको सुरुआत गरेको थियो। भेन्डिङ मेसिनमा प्रयोग हुने प्याड सस्तो र सर्वसुलभ बनाउन उनीहरूले प्याडमा लाग्ने करबारे अध्ययन गरेका थिए।
'नेपालमा महिनावारीमा प्रयोग हुने सामग्रीलाई विलासिताको वस्तुको सूचीमा राखिएको छ', शुभांगीले भनिन्, 'महिनावारीको सामानलाई विलासिताको वस्तुको सूचीमा राखिएको छ। यदि अत्यावश्यक वस्तु मानिएको भए १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने थिएन।'
शुभांगीका अनुसार भारतमा महिनावारीको सामानमा अहिले कर (जिएसटी) लाग्दैन। नेपालमा भने महिनावारीमा प्रयोग हुने हरेक किसिमका सामानमा कर लाग्ने गरेको छ।
'सुन चाँदीमा भ्याट लाग्दैन रहेछ। त्यस्तै कण्डम र गर्भधारण रोक्ने औषधीमा भ्याट लाग्दो रहेनछ', शुभांगीले प्रश्न गरिन्, 'कण्डममा भ्याट हटाउन सकिने तर किन महिनावारीको सामानमा नहटाउने? जबकी महिनावारी व्यक्तिले नियन्त्रणमा राख्न सक्ने कुरा होइन।'
भारतको ‘नेसनल इन्स्टिच्यूट अफ इन्जिनियरिङ’ बाट स्नातक गरेर आएकी शुभांगी पेसाले इन्जिनियर हुन्। उनकी साथी जेसलिना अमेरिकाको हावर्ड विश्वविद्यालयमा कानुनको अध्ययन गरिरहेकी छिन्। सेतोपाटीले उनीहरूको ‘रातो कर माफ गर’ र ‘प्याड टु गो’ उद्यमबारे तयार पारेको भिडिओ:
प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस १८, २०७८, ०७:५१:००